Snapdragon 845 chipset ပါဝင်တာပထမဉီးဆုံး Smartphone အမျိုးအစားဖြစ်နိုင်တဲ့ Xiaomi Mi Mix 2S! – AsiaApps
Xiaomi ရဲ့လက်ရှိရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပမယ့် MWC 2018 မှာ High-end smartphone အမျိုးအစားကိုမိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi အနေနဲ့ High-end Smartphone အမျိုးအစားကို MWC မှာ မိတ်ဆက်သွားမှာက သေချာပေမယ့် ဘယ်ဖုန်းကို မိတ်ဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
MWC မှာ Xiaomi ချပြမယ့် High-end Smartphone ကိုကျွန်တော်တို့ အစကခန့်မှန်းထားတာကတော့ Mi7ပါ။ ဒါပေမယ့် မနေ့ကထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းကြောင့် Xiaomi Mi Mix 2S လည်းဖြစ်နိုင်တာကိုထပ်မံခန့်မှန်းလို့ရပြန်ပါပြီ။ Mi7ပဲဖြစ်ဖြစ် Mi Mix 2S ပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာတာတစ်ခုကတော့ CPU Snapdragon 845 ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
A rumor image of Xiaomi Mi Mix 2S
Mi Mix 2S ရဲ့ရှေ့ပြေး model ဟာတော့ Mi Mix2ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလမှာထွက်ရှိခဲ့တာပါ။ Mi Mix3မရောက်ခင်ကြားထဲမှာ “S” နဲ့ model တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ Mi Mix 2S ရဲ့ပါဝင်မှုအပိုင်းကိုမသိရှိရသေးပေမယ့် CPU အပိုင်းကလွဲလို့ တခြားနေရာတွေမှာသိပ်ပြီးကွာဟလှမှာတော့မဟုတ်လောက်ဘူးဗျ။ Xiaomi အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဉီးဆုံး CPU အပိုင်းမှာ 845 Snapdragon ပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကိုလိုချင်ရင်တော့ MWC 2018 မရောက်ချင် ချပြမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ MWC မှာတော့ 845 Snapdragon chipset ပါဝင်တဲ့ Samsung Galaxy S9 ရှိနေလို့ပါပဲ။
အဲ့တော့ Xiaomi အနေနဲ့ Mi Mix 2S ကို MWC မတိုင်ခင်ချပြပြီးကမ္ဘာ့ပထမဉီးဆုံး Snapdragon 845 chipset ပါဝင်တဲ့ဂုဏ်ကိုသိမ်းပိုက်မလား၊ Mi Mix 2S ကို MWC မှာပဲ High-end smartphone တစ်ခုအဖြစ်မိတ်ဆက်မလား (ဒါမှမဟုတ်) ကနဉီးအစီအစဉ်အတိုင်း Mi7ကိုပဲ MWC မှာချပြတော့မှာလား ? Xiaomi ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီ။